Qaybaha qaab dhismeedka birta ee Shiinaha oo leh warshad jilicsan oo sarreeya iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Qaybaha qaab-dhismeedka birta ah ee loo yaqaanno waxay dhammaantood ku xiran yihiin gebi ahaan alxanka, riveting ama bolting, iwm. warshadaynta wax soo saarka, rakibaadda degdega ah, muddo gaaban oo dhismo ah, wax-qabad wanaagsan oo seismic ah, maalgashi degdeg ah oo soo kabanaya iyo wasakhowga deegaanka oo yaraada
1) Qalab: .Q235/Q235B/Q345/Q345B
Darajooyinka ugu caansan waa Q235B
(U dhiganta St37.2, S235JR, ASTM A36) iyo Q345B (oo u dhiganta St52.3, S355JR)
2) Size: sida ku cad shuruudaha macmiilka
3) Daaweynta dusha sare: galvanized, feer, alxanka, rinji, iwm.
Qaabka Guud ee Birta
Qaabka H, ​​Dhuumaha birta, xaashida duuban ee kulul
C ama Z waxay u qaabeeyaan saabuunta birta
Singel xaashi bir ah oo midab leh, guddi Sandwich leh EPS, dhogor dhagaxa, PU, ​​dhogor galaas ah iwm.
Qaybaha qaab dhismeedka birta ayaa inta badan loo isticmaalaa dhismaha.Miisaanka isticmaalka waxaa ku jira aqoon-is-weydaarsiga ballaaran, ama bakhaar, dukaanno waaweyn, xarumaha madadaalada iyo garaash qaab dhismeedka birta ah.
TaageeroLa habeeyayAdeegyada Habaynta:
Galvanized, feeray, alxanka, rinjiyeeyay
Qaab dhismeedka birta ayaa leh astaamo u adkaysta dabka sare, iska caabinta daxalka oo xoogan.Bakhaarka qaab dhismeedka birta waxaa inta badan loola jeedaa in qaybta ugu muhiimsan ee ka samaysan birta ay ka kooban tahay.Oo ay ku jiraan tiirarka birta, alwaaxyada birta, qaab dhismeedka birta, saqafka birta ah.
Saqafka iyo derbiga waxaa laga samayn karaa gole isku dhafan ama lakab.Biraha galvanized waxay ka hortagi kartaa miridhku iyo daxalka.Isticmaalka furaha is-taajinta ayaa ka dhigi kara xiriirka ka dhexeeya taarikada si dhow, si looga hortago daadinta.Waxa kale oo aad isticmaali kartaa gole isku jira saqafka iyo gidaarka.Sandwichku waa polystyrene, fiber galaas, dhogor dhagax ah, polyurethane.Waxay leeyihiin dahaarka kulaylka wanaagsan, kuleylka kulaylka, dab-demiska.Darbiga dayactirka qaab dhismeedka birta wuxuu kaloo isticmaali karaa gidaarka leben.Qiimaha gidaarka lebenku wuu ka sarreeyaa saqafka iyo gidaarka birta galvanized.